Torolàlana ho an'ny mpitsabo an-dranomasina ho an'ny fifanarahana momba ny fiarovana an-dranomasina | Fiaretana haran-dranomasina
Ny torolàlana momba ny fifanarahana momba ny fiarovana an-dranomasina (MCAs) dia natao hitondrana ireo mpikarama hanao dingana iray hanadihadiana, hifampiraharaha, hamolavola ary hampiharana MCA. Ny Field Guide dia azo ampiasaina ho antontan-taratasy tsy miankina, na mba hamenoana ireo fizotrany hafa.
Ahoana ny fandaminana ny MCA Field Guide?
Harambato fandosirana ao amin'ny nosy Chumbe. Sary © Chumbe Island Coral Park Ltd.
Ny ankamaroan'ny tetik'asa MCA dia mitaky fizahana ara-dalàna ara-dalàna sy ny fizotry ny fifampiraharahana tsy ara-potoana, izay samy miankina amin'ny karazana sy ny toerana misy ilay tetikasa. Ny MCA Field Guide dia manoritsoritra fizarana efatra sy dingana maromaro ao anatin'ny dingana tsirairay izay azo ampiharina tsikelikely. Na izany aza, ny toe-javatra mety hitrangan'ny tetikasa dia mety mitaky ny mpitsabaka hiala amin'ny laminy amin'ny alàlan'ny fanatanterahana asa sasany alohan'ny hafa na amin'ny fiverenana amin'ny asa efa vita, saingy mitaky asa fanampiny.
Taorian'ny dingana tsirairay, ary ny ankamaroan'ny dingana 1 dingana, dia misy tabilao ohatra natao hanampiana ireo mpitsabo hahalala ny fomba ahafahana mamintina ny fikarohana. Ny asa famintinana fohy ho an'ny dingana sy dingana dia misy ao amin'ny fizarana Resaka eto ambany.
Ny MCA Field Guide Checklist dia omena amin'ny pejy tsirairay ao amin'ny Torolàlana ho an'ny saha mba hanampiana ireo mpitsabo hanaraka ny toerana misy azy.
Iza no afaka mampiasa ny MCA Field Guide?
Gili Trawangan, Indonezia. Sary © Jay Udelhoven / TNC
Ny MCA Field Guide dia azo ampiasaina amin'ny mpanolo-tsaina sy ny tompon-trandraharahan'ny fiarovana mba hanombanana, hanombohana, hamerenana ary hampiharana ny MCA amin'ny toeram-ponenana na amin'ny lanja lehibe kokoa. Ireo mpanohitra amin'ny fiarovana dia mety ho, fa tsy voafetra ny, ny governemanta, ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (ONG), ny orinasa tia tanindrazana, ary na dia ny olon-tsotra sy ny vondrom-piarahamonina aza. Ireo tompon-trosa (miaraka amin'ny tompony, ny mpitantana, ary ny mpampiasa ny ranomasina sy ny faritra amoron-tsiraka ary ny loharano) dia mety, fa tsy voafetra ny, ny olona tsirairay sy ny fianakaviana, ny vondrom-bahoaka, ny mpampiasa sy ny vondrom-piarahamonina, ary ny governemanta. Ny sampan-draharaha manombana, manomboka, mijery ary manatanteraka MCA dia tetikasa manokana.
Ny torolàlana momba ny zana-pampianarana dia novolavolaina tamin'ny fampiasana ny fampahalalana sy ny fanadihadiana momba ny fampandrosoana, ny firoboroboan'ny tany ary ny firenena mandroso, ary mety tsara amin'ny fampiasana azy telo. Ny Tari-dalana momba ny sidina dia natao hampiasaina amin'ny mpitsabo sy ny mpihaza.
Ny sampan-draharaha izay tsy maintsy mandinika ara-dalàna, ankatoavina, ary fametrahana MCA dia miankina amin'ny rafitra ara-dalàna mifehy ny MCA. Raha kely indrindra, ny mpanohitra sy ny tompon-trosa dia tokony handinika sy hankatoavina ny MCA. Matetika anefa dia hevitra tsara raha misy sampan-draharaham-panjakana maro, anisan'izany ny ambaratongam-pahefana samihafa, ary mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana no tafiditra ao amin'ny dingana MCA na dia tsy ara-dalàna aza. Amin'ny farany, ny mpandray anjara rehetra mivantana sy tsy mivantana dia mandinika sy manaiky ny MCA mialoha ny fampiharana dia mety hanamora ny fanohanana maharitra sy ny fampiharana ilay tetikasa mora sy mahomby kokoa.
Raha ny vondrom-piarahamonina na ny governemanta ao an-toerana dia ny mpanohitra na ny tompon-tratra ho an'ny MCA nomena azy dia hanana anjara mivantana amin'ny fanombanana, fampandrosoana ary fankatoavana ny MCA. Raha manomboka ny MCA ny vondrom-piarahamonina na ny governemanta ao an-toerana, dia azo inoana fa hitarika amin'ny fanombanana, ny fampandrosoana ary ny fankatoavana. Raha misy hafa manomboka ny MCA, dia ny mponina sy ny governemanta eo an-toerana no hahazo ny vaovao sy fangatahana mifandray amin'ny MCA. Raha toa ka tsy tafiditra mivantana amin'ny MCA ny vondrom-piarahamonina na ny governemanta eo an-toerana, dia mety hisy fiantraikany amin'ny fampiharana ny MCA, avy eo ny fanao tsara indrindra dia milaza fa nokolokoloina izy ireo ary omena fahafahana miditra amin'ny teboka marobe mandritra ny fizotran'ny fanombanana sy ny fampandrosoana.
Ny orinasa iray na maromaro ihany koa dia mety tafiditra mivantana amin'ny MCA ho mpanolontsaina fiarovana na ho mpihazona manan-jo. Noho izany, ireo orinasa ireo dia afaka mandray andraikitra amin'ny famaritana, ny fampandrosoana ary ny fametrahana tetik'asa MCA. Raha toa ka tsy tafiditra ao anatin'ny tetik'asa MCA ny orinasam-panjakana iray, ny orinasam-panjakana dia mety mbola manana andraikitra amin'ny andraikiny amin'ny fiantohana ny fifanarahana amin'ny fifanarahana dia mifampitondra am-pahamendrehana, mamantatra sy mihevitra ny olana sy ny fepetra ilaina rehetra, ary matetika dia mihetsika araka ny lalàna.
misokatra amin'ny varavarankely vaovao MCA Field Guide: Malagasy manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovao MCA Quick Guide: Malagasy manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovao MCA Field Guide: Espaniola manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovao MCA Quick Guide: Espaniola manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovao MCA Field Guide: Bahasa Indonesia manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovao MCA Quick Guide: Bahasa Indonesiamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovao MCA Field Guide Checklistmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovao Tetikasa MCA: PDF
Fitaovana MCA: Word Document